छोराछोरी र वयस्कहरु को छुट्टी मा कस्तो किसिमको मिठाई जोडिएको छ? बेशक, केक। कुनै पनि उत्सव उत्सवको अपरिहार्य सजावट हुनु, यो नाजुक बेकिंग संसार मा मानक मानिन्छ। केक तयार गर्न को लागी व्यञ्जनहरु को बहुतायत यो पनि सबै भन्दा अधिक मांग गोर्नेट को स्वाद को पूरा गर्न सक्छ। गुणस्तर व्यभिचारको उत्पादनको लागि तपाईंले दुई नियमहरू पछ्याउन आवश्यक छ। पहिलो नियम भनेको एउटा वास्तविक केक स्वादमा बेवास्ता हुनुपर्छ। दोस्रो महत्वपूर्ण कारक उत्पादन को उपस्थिति हो। यी दुई नियमहरू अनावश्यक छन्, र तिनीहरूका संयुक्त अवलोकनहरूले डेसर्टको संसारमा उत्कृष्ट कृति सिर्जना गर्नेछ।
प्राय: बेकिंग केक, धेरैले उनीहरूलाई आफ्ना प्रियजनहरूका लागि एक आश्चर्य बनाउन चाहन्छन्। सबैभन्दा छरितो र यादगार आश्चर्य र उपहार "Mamontenok" केक हो। आखिर, यो एनिमेटेड पात्रले सबै शुद्धता, प्रेम र ईश्वरीय ईमानदारीमा सबै ईमानदार ईमानदारीलाई गहिरो बनाउँछ।
एक राम्रो केक "Mammoth" बेक गर्न? तपाईंले मात्र ताजा र गुणस्तर उत्पादनहरू छनौट गर्न आवश्यक छ। केवल प्राकृतिक अवयवहरूको साथमा एयर केकहरू पाउनेछन्। घर मिडी, दूध र खट्टा क्रीम मनपर्छ यदि तिनीहरू मिठाई नुस्खामा उपस्थित हुन्छन्। एक प्रिमियम केक लागि आटा लिनुहोस् र निश्चित रूपमा यसलाई लिनुहोस्। आटा बढाउँदै यसले अक्सिजनसँग समृद्ध पार्न सक्छ, जसले पाक र हल्का बनाउनेछ।
धेरै स्वादिष्ट केक "मम्मथ" बिस्कुट वा एक औषधिको लागि आटाको आधारमा तयार हुन सकिन्छ। तर प्राय: तिनीहरूले यो नुस्खा प्रयोग गर्छन्:
अन्डा - 4-5 टुक्राहरू।
चीनी - 120-130 ग्राम।
खट्टा क्रीम - 400 जी।
Vanilla sugar - 1 packet।
बकिङ पाउडर - 1 चम्मच।
चीनी - 200 जी।
अँग्रेजीमा चिनी र वेनिला शर्करा (मिक्सरको साथ) लाई फोममा हरायो। त्यसपछि आटा, बेकिंग पाउडर जोड्नुहोस्, र फेरि त्यहि क्षमतामा। खट्टा क्रीम थप्न र राम्ररी मिश्रण गर्नुहोस्। आटाले मोटो र मलाई कष्ट पार्दछ। एक फारममा खान्नुहोस् जसमा प्रजाति संग लिइएको छ, एक पूर्व ओवनमा 1800सी, 20-30 मिनेटमा। केक शांत हुँदा, क्रीम संग उनीहरु चिकन।
केक को उपस्थिति अलग हुन सक्छ र बेकर को विचारहरुमा मात्र निर्भर गर्दछ। तपाईं यसलाई पूर्णतया बनाउन सक्नु हुन्छ। यो गर्न को लागि, कोक को संख्या को संख्या को रूप मा बनाउन को लागी र क्रीम संग सजावट को आवश्यकता हो किनकी एक कन्फेक्शनरी सिरिंज को लागी लगाईएको नली को मदद संग। एक बर्फ फ्लोमा धेरै सुन्दर म्यामोथ पनि देखिन्छ। यो गर्न, केक फ्लोज को रूप मा केक बनाइन्छ र यसलाई राखिएको देखि माठोट को एक आंकडा मा राख्नुहोस।
कसैले पनि अचम्मको केक "मम्मत" तयार पार्न सक्छ। यसको लागि यो कन्फेन्सरको डिप्लोमा आवश्यक छैन, मुख्य कुरा यो तपाईंको सबै आत्मा र सकारात्मक भावना राख्नु हो। खैर, सामान्य खाना पकाउने एक सानो विचार।
आमाको लागि यस्तो मूल केक "मामोथ" ले बच्चाबाट कुनै छुट्टिको लागि उपहार पाउनेछ। र यसले कुरा गर्दैन कि बच्चाले मधुमेहबाट गुणस्तरको गुणस्तर बनाउन सक्षम नहुन सक्छ। सबै पछि, यो अन्य उपलब्ध उत्पादनहरूबाट सिर्जना गर्न सकिन्छ जुन सँधै उपलब्ध छन्। कुनै पनि अवस्थामा, आमाहरूलाई यस्तो ध्यानले छोडिनेछ।
संलग्न देखि प्रेम कसरी भेद गर्न: मनोवैज्ञानिक
शरद ऋतुको छुटका लागि बालबालिका कहाँ जानुहोस्? बाटो छान्नुहोस्
क्यामेरा "Olympus": निर्देशन मोडेल, ग्राहक समीक्षा र विशेषज्ञ को समीक्षा
पूर्वप्राथमिक मा एक गर्मी मनोरञ्जन गतिविधिहरु योजना। बाल सदन